Blogs&Beers miaraka amin’i José Luis Orihuela · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Desambra 2018 7:16 GMT
(Marihina fa tamin'ny volana Jona 2006 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nitsidika an'i Shily i José Luis Orihuela raha nasain'ny Fivoriamben'ny Serasera Iraissam-pirenena sy ny Atrikasa izy. Nanasa an'i José Luis hiresaka amin'ireo bilaogera Shiliana tamin'ny fihaonana Blogs & Beers [Bilaogy sy Labiera] ireo bilaogera samihafa raha manararaotra ity fotoana manokana ity.
Niresaka momba ny asa fanaovan-gazety malalaka i José Luis ,ary ny fahasamihafana tahaka ny hoe, raha tokony hiteny hoe fandraisana anjaran'ny mpanao gazety (araka ny lazaintsika hoe hetsika famahanana bilaogy) dia tokony hilaza hoe “media sosialy” isika. Nanazava izy fa tsy ny bilaogera rehetra akory no mpanao gazety ary nanome ny sarisarin'ny bilaogera fa mitovy amin'ny DJ ny bilaogera, satria tsy mamorona ny mozika izy ireo fa manova ny mozika izay efa misy ihany. Momba ity lohahevitra ity, hoy i Roberto raha nanoratra hoe:
“Raha ho ahy, hitako ho marina io famaritana io. Ny mozika nafangaroko manokana dia manana ny zava-misy marina, ny fampahalalam-baovao, ny zava-niainana manokana sy ny hevitra, ny fitsarako sy ny fitsarana an-tendrony, ny hazavana mandalo amin'ny fahitalavitra sy ny pejy voalohan'ny gazety, ireo boky novakiako, ireo bilaogy hitako sy ireo fanehoan-kevitra ary ny resadresaka isan'andro. Tsy mpanao gazety aho, fa bilaogera “
Hita ao amin'ny Atina Chile ny fanadihadiana mahaliana momba ity olana ity ary ao amin'ny lahatsoratr'i Maria Pastora (ES) dia manoritsoritra ny fihetseham-pon'i Orihuela ihany koa izy:
“Nahafinaritra ny niaraka tamin'ilay bilaogera malaza indrindra amin'ny teny Espaniôla: lehilahy tony, misokatra ho amin'ny resadresaka, tena tsara fanahy ary tsy miavonavona. Saingy tamin'ny ankapobeny dia nahafantatra zavatra betsaka taminy izahay ary niresaka momba ny zavatra iray izay nahaliana anay: bilaogy! “
Nizara ny fanamarihan'izy ireo i Alexis , izay nanatrika ny Blogs&Beer sy ny fivoriambe:
“Ny fahafahan'ny tsirairay mamoaka lahatsoratra no vaovao tsara. Ny fahafahan'ny tsirairay mamoaka lahatsoratra no vaovao ratsy . “
Nanoratra ny mifandraika amin'ny asa fanaovan-gazety mitsiranoka
“Niresaka momba ny fanaovan-gazety mitsiranoka i Orihuela, ity fahasamihafana amin'ny fomba nentim-paharazana izay nanaraka ny lamina ity. Tokony mahay mifanaraka amin'ny fotoana vaovao ny mpanao gazety. Ho malalaka, mahay mamolavola. Miezaha ho matihanina amin'ny adihevitra iray, kanefa ihany koa ampiasao amin'ny fomba samihafa ny fiteny. Mametraka fanamby ny bilaogy : ny mihaino ny mpamaky no tena zava-dehibe “.
Maimaim-poana ilay fanasana. Afaka nandefa fanehoan-kevitra avokoa ny rehetra mba hanamafisana ny fanatrehana tao amin'ny: bilaogy El medio , Menudencias, Alfredo Sepulveda, Red de blogs UC, eCuaderno y Sergio Fortuño (izay mitantara ny hevitr'ireo bilaogera ho an'ny Radio Concierto).
Hita eto ireo sary avy amin'i Maria Pastora .